ချစ်ရအောင်: C++ Programming(Lesson 1)
C++ Programming(Lesson 1)
Posted by Unknown Programming
အားလုံးပဲ..မင်္ဂလာပါရှင်..။ ညီမ..ဟိုတနေ့က Programming အကြောင်းတစေ့တစောင်းဆိုပြီး.. Programming တွေကို.. ဘယ်ကနေဘယ်လိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာ.. ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ကနေစပြီး.. အခြေခံဖြစ်တဲ့.. C++ programming ကို.. သင်ကြာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..။ အရင်ဆုံး..လိုအပ်တဲ့ software တွေကို.. download ချလိုက်ပါနော်..။
Download Turbo C for windows7
- Download ဆွဲလို့ရလာတဲ့.. zip file ကိုဖြည်လိုက်ပါ..။
- Turbo C ဆိုပြီး.. file တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..။ အဲ့ထဲမှ.. INSTALL.EXE ကို.. ဖွင့်လိုက်ပါ..။ Install လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်.။
- ဘယ်မှာထားမလဲဆိုပြီး..မေးရင်.. C: or D: ကြိုက်တာထားလို့ရပါတယ်..။ box လေးတွေ..အဆင့်အဆင့်တတ်လာပါလိမ့်မယ်..။ Enter ကိုသာ.နှိပ်သွားပါ..။
- Installation ပြီးသွားရင်.. တကယ်လို့.. C အောက်မှာထားခဲ့ရင်.. C:\_TC\_BIN\_TC.EXE ကိုသွားဖွင့်လိုက်ပါ..။ D အောက်မှာဆိုရင်တော့... D:\_TC\_BIN\_TC.EXE မှာရှိပါတယ်.။
- Screen အပြာရောင်နဲ့..တတ်လာပါလိမ့်မယ်..။ တကယ်လို့...သင့်ကွန်ပျူတာက.. မနိုင်ခဲ့ရင်.. "This system does not support fullscreen mode. Choose 'Close' to terminate the application" ဆိုပြီးတတ်လာပါလိမ့်မယ်..။ Fullscreen မပြနိုင်လို့..တတ်လာတာပါ..။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး..။ Ignore ကိုသွားရွေးလိုက်ပါ.. ^_^
- software design ကတော့.. မလှပါဘူး..။ cmd လိုပါပဲ..။ အပြာရောင် screen မှာ.. code တွေရေးရတာပါ..။ လောလောဆယ်တော့.. program ရေးနည်းအကြောင်း.. အရင်ပြောလိုက်ကြရအောင်နော်.. :)
#include< header file >
header file နေရာမှာ.. ဘာရေးရလဲဆိုရင်.. iostream.h ပါ..။
iostream.h ဆိုတာ.. ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်.. Input Output Stream.Header ကိုပြောတာပါ..။
output ကို.. C++ မှာ..ဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုရင်..
~ user ရိုက်ထည့်ချင်တာတွေကို.. cin>> နဲ့လက်ခံပါတယ်.။
~ user က..ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာ.. ပြချင်တာတွေကို cout<< နဲ့ထုတ်ပါတယ်.။
what are cin and cout?
~ cin ဆိုတာ.. Console Input ပါ။
~ cout ဆိုတာ.. Console Oupt to the monitor screen ကို..ပြောတာပါ..။
>> means "Right Shift Assignment"
<< means "Left Shift Assignment" လို့ခေါ်ပါတယ်..။
ဒါတွေက.. အခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းတွေပါ..။ သိထားရင်တော့..အကောင်းဆုံးပါပဲ.. ^_^
နောက်ဆက်လက်ရေးသားမယ့်.. lesson တွေကို.. အားပေးကြပါဦးလို့ပြောကြားရင်း.. ဒီနေ့တော့.. ဒီလောက်နဲ့ပဲတော်လိုက်ကြရအောင်နော်... ^_^
$U Y4T4N4R ~ www.technologicalvilla.blogspot.com
Aung Ko Minn said...
how can i contact to u ? Such as social acc fb or other . i want to study about programming from u . So thanks you .